Ukuthelekisa kwe-ArcGIS kunye ne-GIS-Gofumadas
Matshi, 2009 ArcGIS-ESRI, GIS asibonise
Yinto nje umsebenzi we-titanic obizwa ngokuba ngumsebenzisi ongenanto obizwa ngokuba yi-tomasfa uye wenyuka kwiforum kwesi sixhobo. Ingikhumbuza loo msebenzi nguArthur J. Lembo xa wenza umsebenzi ochanekileyo indlela yokwenza kunye ne-ArcGIS kunye ne-Manifold ngendlela efanayo. Ngaphezulu komqondo othelekisa, ndiye ndatshitshiswa ngumlinganiselo wezenzo ezahlukana nesihloko esinomxholo wemfundo kakhulu ukuthelekisa izixhobo ze-GIS xa wenza isigqibo.
Le uthelekiso isekelwe matrix ukuba esahlula irekhodi ukusetyenziswa yesiqhelo uhlanganiso eqhelekileyo, oko akuyi kusekelwe ekwenzeni yesiqhelo ngezilingo kodwa ArcGIS, ngoko ibonisa ukuba wenza ArcReader, ArcView, ArcEditor okanye ArcInfo. Ukuya ekunene kokuba kuboniswe nokuba ayiwenzi okanye hayi GIS ngezilingo.
Iimbono zeforum ziyaxhaswa kwaye zincinci, kwaye akumangalisi kuba yinkqubo yesicelo esithile kwaye kuya kwenzeka enye ukuba iqonga likhuphiswano. Kwakhona kunceda ukuqonda ezinye zeengcinga zeentengiso zezinto ezininzi.
Kulo msebenzi ndibona ubuncinane ezi zixhobo:
Uludwe lweenkqubo ze-GIS
Uluhlu lweendawo ekufuneka ziqwalaselwe kwisicelo se-GIS
Thelekisa oko i-ArcReader yenzayo ngeArcView, ArcEditor kunye neArcInfo
Thelekisa iAcGGIS ngeNgcaciso
Ekugqibeleni uxwebhu aluqineki kuba lujolise ekuveliseni ukuthelekiswa okumele kusetyenziswe ukwenza izigqibo. Kakade ke, ukuthelekiswa komntu omnye kuya kulula, ngakumbi ekubeni i-ArcGIS isekelwe kuyo isixhobo esisisiseko kunye ezininzi kwandiswa okanye iinguqu ezikhethekileyo ezijoliswe kwiimpawu ezihlukeneyo. Nangona i-Manifold isixhobo esizama ukwenza iindlela ezisetyenziswa kakhulu ngabasebenzisi be-GIS, kwisixhobo esisodwa (nangona kunjalo iyakwazi ukuhamba) Izinto ezininzi ezenza ArcGIS Izandiso kubandakanywa kodwa uninzi kula udlula yintoni eyenza zonke ukwandiswa ArcGIS ngokukodwa ngexabiso kakhulu kakhulu.
Apha ndilishiye uluhlu ubukeka enkulu, kuphela iiheader nganye kwezi yesiqhelo kuquka ngaphezu imisebenzi 1,100 kwaye zingabuthisi intsingiselo yokuqala ndiya kuyishiya e IsiNgesi.
Uhambo lwe-USA (StreetMap ™ USA)
Data Data Display
Ulwahlulo lweeVeki zeeVatic
Uboniso olukhawulezayo: I-Gradual Ramp Data Data-Stretching Algorithms
Iimpawu zemiSebenzi yeRaster
Iindlela zeMboniselo zeRample Display
Izindlela zokuHlola eziKhuselekileyo
Ukubonakaliswa kweeNkcazo zeNkcazo
Izixhobo ezininzi (i-Point, Line, nePolygon)
Imephu Ukuhamba Ngethuba Ukuhlela
Data Data Transformations
Ulungiso olukhawulezayo kunye neVectorization
Vectorize Zonke iiFomathi zeRaster ezixhaswe kwi-ArcGIS
I-Geaster Snapping Geometry
KwiRaster Snapping Environment
Indawo yokuCoca kweNdlela
Ucoceko lweeNkcazo zokuCoca
Ifoni - Ukuhlanganiswa kweGPS
Inkxaso ye GPS
Ulawulo lokuqhubela phambili
Ulungiso olutshanje loTshintsho
Bonisa kunye neKhowudi
Ukuxhumeka kokuHlelwa kokuPhucula
Distributed Geodatabases Ukuqhubela phambili
Ukuboniswa kwendawo yeDatha yeDatha (i-Georeferencing)
Gcina iNgcaciso yenkcazelo yeSpatial
Khangela i-GIS Data By
Lawula iNgcaciso yeDatha
I-UML / CASE Tool Integration
Lawulo lwe Geodatabase
Ifayile yokuTshintshana kweNgenisa / ukuthumela ngaphandle
Yakha kwaye Hlela ubudlelwane phakathi kweMpawu
Geodatabase Ubuhlobo Bokuziphatha
Ulwalamano lweKlasi lokuHlala
I-Geodatabase I-Topology yokuLawula uMthetho
Management Geology Database
Imigaqo yeGeodatabase Topology
Imigaqo yoLwazi lweNethwekhi yeGeometric
Jonga iMetadata usebenzisa iiStyles ezahlukeneyo
IiNkcazo ezisekelwe kwiSkripthi
Ulawulo lweDatha jikelele
Management Class Class
Iinkqubo kunye noTshintsho
Ukuguquguquka okukhawulezayo / ukulungiswa
Uluhlu kunye noLwahlulo lwetafile
Iziganeko zobume beziTekisi-Ukuhlalutya iipatheni
Izixhobo zemiSebenzi yeziTatati-Iiplanga zeMephu
Izixhobo zemiSebenzi yeziNani-UkuLawulwa kweeNdawo zoLuntu
Ulwahlulo lweStatistic Statistics-Modeling Relations Relations
Izixhobo zoLwazi lweMatriki-Ukunikezelwa
Izixhobo zobume bezixhobo-izixhobo
Ulawulo lwe-ArcGIS Server
Nangona umsebenzi ugqitywa ngokubambisana ngabasebenzisi beforum, apha ungayilanda ifayile epheleleyo
Post edlulileyo«Edlulileyo I-GIS Imbonakalo yokudala izakhiwo zokushicilela
Post Next Usuku olucinezelayo ebomini beGeofumadasOkulandelayo "